Muxuu ka yiri Messi kaddib markii uu xulka Argantina u soo baxay wareega siddeeda ee Copa America 2019? – Gool FM
(Brazil) 24 Juunyo 2019. Lionel Messi ayaa dhaleeceeyay garoomada Brazil ee lagu qabanyo tartanka Copa America 2019, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kaddib markii ay u soo bexeen wareega siddeed dhamaadka.
Xulka Argentina ayaa xaqiijiyey in 4 dhibcood ay ugu soo baxeen wareega siddeed dhammaadka ee Copa America 2019, kaddib markii ay ku garaaceen Qatar 2-0, waxayna wareega xiga kula ciyaari doonaan dhigooda Venezuela.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Lionel Messi kaddib ciyaarta wuxuuna yiri:
“Kubadda ima aysan i rabin sababa la xiriira garoonka, dhamaan garoomada aan ku ciyaarnay waxay ahaayeen kuwo xun, weyna adag tahay inaan sidaan ku ciyaarno”.
Intaas kaddib Messi ayaa ka hadlay guushii ay ka gaareen xulka qaranka Qatar wuxuuna yiri:
“Waxaan ciyaarnay kulan aad u fiican, waxa ugu muhiimsan ayaana ah inaan guul gaarnay, waxaan u baahneyn kulan sidan oo kale ah si aan u helno kalsooni iyo xasillooni”.
“Taageerayaasha mar walba wey nala joogaan, waxay na siiyeen rajo, waana inaan ka faa’iideysanaa, hadda waxaa bilaaban doona tartan kale”.
“Waa inaan raadinnaa dheelitirnaan, waxaan dooneynaa inaan ku ciyaarno weeraryahano badan, laakiin ciyaartoyda weerarka ah waa inay si adag u cadaadiyaan kooxda naga soo horjeeda”.